အမည်ပျက်စာရင်း | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ » အမည်ပျက်စာရင်း
အမည်ပျက်စာရင်း APK ကို
ဤအဆင့်မြင့်ခေါ်ဆိုခ / sms ကို filter ကိုနှင့် blocker tools များဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်စာရင်း Create နှင့်သင့် Android ဖုန်းနှင့်အတူလုံခြုံနေဖို့။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ app ကို, ဒါပေမယ့်မည်သူမဆိုထံမှမလိုချင်တဲ့ခေါ်ဆိုခ / စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ငွေရတတ်သောသူနှင့်အစွမ်းထက် features တွေဖြစ်ပါတယ်။
kit Kat နဲ့ Lollipop အသုံးပြုသူများသည် - SMS ကိုပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ် xposed မူဘောင်။
ဒီ app ကိုအခြေခံခေါ်ဆိုမှုနှုန်း ID ကို (အဝင်နံပါတ်) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ Caller Id များအမည်ပျက်စာရင်း, ဒါမှမဟုတ်ခြွင်းချက်စာရင်းနှင့် configured ပိတ်ဆို့ခြင်းရွေးချယ်စရာသို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ ဤတွင်အင်္ဂါရပ်များစာရင်းကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ ပိတ်ဆို့ခြင်း:
တစ်ဦးအမည်ပျက်စာရင်းများအတွက်☆ Block ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု / စာသားကို / MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ (နံပါတ်တစ်စာရင်း)
ပုဂ္ဂလိကနံပါတ်များကိုများအတွက်☆ Block ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု / စာသားကို / MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျ (အဘယ်သူမျှမနံပါတ်များ, အဘယ်သူမျှမခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီ), နံပါတ်များကိုငါ့အဆက်အသွယ်အတွက်
အကျူး / Post-ပြင်ဆင်ချက်နံပါတ်များကိုများအတွက်☆ Block ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု / စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ
☆ Exception စာရင်း (စာရင်းပိတ်ဆို့ပါဘူး) (PRO)
☆လွင်ပြင်စာသားကိုသို့မဟုတ်ပုံမှန်စကားရပ်အားဖြင့်စာသား filter များ, ရှေ့ဆက်-ပွဲ, postfix ပွဲ။
2 ။ အမည်ပျက်စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ:
တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်☆ Options ကို:
- ringer ပိတ်မည်
- ရွေးချယ်စရာ (application ရဲ့ setting ထဲမှာအပြောင်းအလဲ) "တက်ဆွဲထားပြီးတော့ကောက်"
☆အတိအကျအပါအဝင်အဆင့်မြင့်အရေအတွက်ကိုကိုက်ညီ mode ကိုအတူအဆုံးသတ်ရန်နှင့်အတူစတင်ပါရှိသည်ပုံမှန်စကားရပ်
☆ Blocking မြင်ကွင်း (application ရဲ့ setting သို့မဟုတ်ဝစ်ဂျက် (စာနယ်ဇင်းမူလစာမျက်နှာ / menu ကို / နာမည်ပျက်စာရင်း / ဝစ်ဂျက်ထဲကနေဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်)
- အမည်ပျက်စာရင်းဖယ်ထုတ်လိုက်ခြွင်းချက်စာရင်း (ပုံမှန် mode ကို) တွင် Block ကိုနံပါတ်များ
- Block ကိုအားလုံးနံပါတ်များကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ခြွင်းချက်စာရင်း (အလွန်အသုံးဝင်သင်အားလပ်ရက်၌ရှိကြ၏အခါ)
- Block ကိုအားလုံးနံပါတ်များကို (သင်အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်)
- ပယ်အမည်ပျက်စာရင်း Turn
- ပိတ်ဆို့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အော်တို SMS ကိုပြန်ကြားချက်
☆ကို SMS မှတ်တမ်းများမပါဘဲ / နှင့်အတူပိတ်ဆို့
ပိတ်ဆို့လွဲချော်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းရန်☆ Option ကို
3 ။ configuration
☆တင်ပေးသူထံမှနာမည်ပျက်စာရင်းရဲ့ icon ကိုဖျောက်ထားပါနှင့် app ကို (ပုံသေဖြစ်ပါတယ် <5555> သို့မဟုတ် <## 5555> ဖွင့်ဖို့ dial
on / off ကိုဖွင့်ဖို့☆ဇယား (PRO)
☆အနက်ရောင်စာရင်းသို့သွင်းကုန်အဆက်အသွယ် / ခေါ်ဆိုခမှတ်တမ်းများ / sms ကိုသို့မဟုတ် (မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ်၌) တစ်ဦးထုံးစံအရေအတွက်က add
☆ ( ... , ကျော sms ကိုပြန်မခေါ်, ရှာ, delete, restore, (PRO) ကို disable) အလွယ်တကူမှတ်တမ်းများစီမံခန့်ခွဲ
☆ Disable လုပ်ထား / သစ်လုံး (PRO) ကို enable
☆ Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (PRO)
☆ကို disable / Enable ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသတိပေးချက်
☆အမည်ပျက်စာရင်း setting များကို Backup ကိုနှင့် restore
4 ။ ဝစ်ဂျက်
မြင်ကွင်းနှင့်ဘုံ configuration ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုပြောင်းလဲ☆လျင်မြန်စွာလက်လှမ်း widget က
5 ။ အတည်ပြုပါ Call များနှင့်လျှို့ဝှက် Box ကို module တွေ
6 ။ ပွဲနှင့်အခန်းအနားထက်ပို:
☆အော်တိုအကြောင်းပြန် pre-defined တင်းပလိတ်များ
☆ပြောင်းလဲခြင်း widget က themes များ
☆လျင်မြန်စွာ / ခြွင်းချက်စာရင်းနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းရန်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခ / စာသားသည်အရေအတွက်အား add
☆ http://www.getlocalization.com/blacklist/ အနည်းငယ်လိုင်း Drop
* PRO: Pro ဗားရှင်း Android Market ကိုအပေါ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
* မမြင်နိုင်သော: မမြင်နိုင်သောဗားရှင်း Pro ဗားရှင်း likes, ဒါပေမယ့်သူက icon တစ်ခုနှင့်နာမည်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားရှိပါတယ်
* မှတ်ချက်: setting ကိုသွားပါ, အင်္ဂါရပ်ကိုတက်ဆွဲထားပြီးတော့ကောက်ကို enable / တက်ဆွဲထားပြီးတော့ကောက်
☆ခေါ်ဆိုသူ၏အသံစာကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်: Block ကို "ကိုအဆုံးသတ်ကိုပဌနာ" နှင့်လှည့် OFF "ထလည်ဆွဲချပြီးတော့တက် Pick" နဲ့နံပါတ်
☆အသံစာကိုမှမပို့ပါနဲ့: Block ကို ON "ထို့နောက်တက်လည်ဆွဲချတက် Pick" "မခေါ်အဆုံးသတ်" နှင့်လှည့်နှင့်အတူတစ်ဦးအရေအတွက်ကို
☆ Issue အစီရင်ခံစာ: support@anttek.com အီးမေးလ်
- MMS ကို: မာလ်တီမီဒီယာ Messaging ကိုဝန်ဆောင်မှု
- စာသား ~ SMS ကို: က Short Messaging ကိုဝန်ဆောင်မှု
ထောကျပံ့ဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, Français, Español, ဖြင့်, Italiano, Pусский, Slovenských, Deutsch, Português, Svenska, 臺灣福建話, Polszczyzna, Português, עִבְרִית (ဟီဘရူး), Lietuva, العربية (Arabic အဘိဓါန်), Magyar, 한국어, Română, Ελληνικά , Български, TiếngViệt
- Fix ပျက်ကျမှုသည့်အခါပွင့်လင်းချိန်ညှိမှုများ
ဇွန် 2, 2015
Dipu Hossain က Bayzait says:
စက်တင်ဘာလ 30, 2016 မှာ 3: 14 နံနက်
ဟဲလိုသင်၏ဝဘ် filter ကိုသည်နှင့်ကိုယ့် Jan ထံမှဖြစ်ကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ဒါ iran အတွက်အခမဲ့ download ပြုလုပ်အချို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်
prajapati shailesh says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2015 မှာ 8: 54 ညနေ
ဇူလိုင်လ 4, 2015 မှာ 1: 16 ညနေ
လွယ် apps များ & ဂိမ်းများကိုတွေ့ရှိရ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2014 မှာ 10: 40 ညနေ
အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2014 မှာ 10: 34 ညနေ
အများကြီးအခမဲ့ download ပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်စကား။ iran အတွက် im
အောက်တိုဘာလ 8, 2014 မှာ 9: 12 နံနက်
ကျေးဇူးတင်စကားအလွန် ............ ။ android apps များအဘို့အလွန်ကောင်း site ကို။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရှုပ်ထွေးဘာမျှမ။
စက်တင်ဘာလ 25, 2014 မှာ 3: 28 ညနေ
ဟဲလိုသင်၏ဝဘ် filter ကိုသည်နှင့်ကိုယ် iran aryai ထံမှဖြစ်ကြောင်းကိုပိတ်ထားဒီတော့အားလုံးကောင်းသောက်ဘ်ဆိုက် iran အတွက်အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သြဂုတ်လ 21, 2014 မှာ 7: 08 ညနေ
ရရှိနိုင်ပါသည်တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ် bcoz ဒီကြိုက်တယ် ......
ကားလို့စ် Marial says:
သြဂုတ်လ 3, 2014 မှာ 12: 17 ညနေ
ငါတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပေမယ့်ကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု. အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားတွေဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်
စက်တင်ဘာလ 30, 2016 မှာ 3: 11 နံနက်
hmmmm မိတ်ဆွေများကအလွန်ချိုမြိန် apps များ ကျေးဇူးပြု. downlaod
ဇွန်လ 28, 2014 မှာ 6: 24 ညနေ
အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်စကား
Goli Ganji says:
ဧပြီလ 3, 2014 မှာ 8: 24 ညနေ
hi, ဦးအခမဲ့ download4ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့် irainian ဖြစ်ကြောင်းကို 2
အလီ Abdollahi says:
မတ်လ 1, 2014 မှာ 2: 49 နံနက်
အခမဲ့ download မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, မဆို၌ငါ့အီရန်ညီအစျကိုဟဲလိုပြောပါကမ္ဘာ၏ခဲ့ကြသည်
Dulera mukeshkumar says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2014 မှာ 4: 01 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2014 မှာ 7: 49 ညနေ
veray ကောင်းသော်ဆိုက်နှင့်အခမဲ့ download များအတွက်င့်ကားများ။
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအီရန် :-) မှ irananian ဟဲလိုဖြစ်ကြောင်းကို
ဇန်နဝါရီလ 8, 2014 မှာ 11: 39 ညနေ
သငျသညျငါက Black list ကို software ကိုကိုချစ်ကိုအဘို့ကြီးစွာသောအလုပ်ဂရိတ်ချစ်လှစွာသောပွုပါပွီ။ ............... ငါ့အပတ်သတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Accept .. !
နိုဝင်ဘာလ 20, 2013 မှာ 11: 58 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 26, 2013 မှာ 10: 57 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 21, 2013 မှာ 9: 23 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါသည်တွေအများကြီးဦးကယ့်ကိုပျော့နေတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာ android ရှိ
သြဂုတ်လ 19, 2013 မှာ 11: 54 နံနက်
Nahi yaaroooo Yeh software ကို itna bhi achha nahi hai jitni tarif isski uppar dikhai gayi hai ။
သြဂုတ်လ 25, 2012 မှာ 1: 42 ညနေ
အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်စကားဈ iran aryai korosh Kabir Persian ဂေါက်သီးအနီးကနေမိပါတယ်
သြဂုတ်လ 25, 2012 မှာ 1: 46 ညနေ